News - ပျိုးပင်များကြီးထွားမှုကို LED စက်ရုံ၏သက်ရောက်မှုကဖြစ်စေသနည်း။
အလင်းအရည်အသွေးကို LED စက်ရုံကြီးထွားမှုမီးလုံး၏အလင်းအရင်းအမြစ်သစ်၏တိကျသောရောင်စဉ်နိယာမအားဖြင့်ပြုပြင်သည်။ စက်ရုံရှိခရမ်းချဉ်သီးများသည်အလင်းကိုပုံမှန်ဖြည့်တင်းပေးပြီး LED စက်ရုံရှိအလင်းအရည်အသွေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ကြီးထွားမှုကိုအလင်းဖြည့်စွက်သည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပျိုးပင်များ၏လေ့လာခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်ရလဒ်များအရ LED မီးနီနှင့်အနီရောင်နှင့်အပြာရောင်မီးတို့သည်ခရမ်းချဉ်သီးအပင်ပေါက်ရန်ကြီးထွားမှုညွှန်းကိန်းများအပေါ်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုများရှိကြောင်း၊ ပင်စည်အထူ၊ လတ်ဆတ်သောခြောက်သွေ့သောအလေးချိန်နှင့်ခိုင်မြဲသောပျိုးပင်အညွှန်းကိန်းများသည်ထပ်ဆင့်အလင်းကုသမှုမပါဘဲခရမ်းချဉ်သီးများထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ အနီရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်အလင်းသည်အစ္စရေးဟောင်ဖန်းခရမ်းချဉ်သီးများ၏ကလိုရိုဖီးလ်နှင့်ကာရိုတိုနွိုက်ပါဝင်မှုကိုသိသာစေသည်။ အနီရောင်သို့မဟုတ်အပြာရောင်အနီသည်ခရမ်းချဉ်သီးတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောသကြားပါဝင်မှုကိုသိသာစွာတိုးပွားစေသည်။ ထို့ကြောင့်ပျိုးပင်အဆင့်တွင်အနီရောင် (သို့) အနီရောင်နှင့်အပြာရောင်အလင်းဖြည့်စွက်ခြင်းအားဖြင့်ခရမ်းချဉ်သီးပျိုးပင်များကြီးထွားမှုကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီးသန်စွမ်းသောပျိုးပင်များစိုက်ပျိုးရန်အကျိုးရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအလင်းဖြည့်ခြင်းနည်းဗျူဟာများနှင့်စံနှုန်းများကိုအခြေခံရမည်။
စက်ရုံစိုက်areasရိယာအများစုတွင်ဆောင်းရာသီနှင့်နွေ ဦး ရာသီ၌ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပျိုးပင်များသည်အပူချိန်နိမ့်ကျပြီးအလင်းအားနည်းနေသည်။ အချို့သောအအေးခံခြင်းနှင့်အပူကာကွယ်ခြင်းနည်းလမ်းများသည်အလင်းအားကိုလျှော့ချခြင်း၊ အလင်းရောင်ပြင်းအားကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ ပျိုးပင်များ၏ကျန်းမာသောကြီးထွားမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်၏အထွက်နှုန်းနှင့်အရည်အသွေးအပေါ်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ LED စက်၏အလင်းများသည်အထူးကောင်းမွန်သောအလင်းအရည်အသွေး၊ မြင့်မားသောအလင်းစွမ်းဆောင်ရည်၊ လှိုင်းအလျားကြွယ်ဝသောအမျိုးအစားများ၊ အဆင်ပြေသောရောင်စဉ်တန်းစွမ်းအင်မော်ဂျူလာ၊ ဒါဟာချောင်းမီးခွက်ကိုအစားထိုးခြင်းနှင့်စက်ရုံစိုက်ပျိုးမှုအတွက်အသုံးပြုကြောင်းနဲ့ LED အလင်းရင်းမြစ်အမျိုးအစားအသစ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်စက်ရုံတိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာမြှင့်တင်ပေးရန်အလင်းပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတနှင့်စွမ်းအင်ချွေတာစက်ရုံ LED မီးလုံးများ၏လျှောက်လွှာကိုတဖြည်းဖြည်းအာရုံကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားပညာရှင်များသည် monochromatic LED သို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်ထားသော LED အလင်းအရည်အသွေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် photosynthetic ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေပြီးတိုးတက်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့် spinach၊ မုန်လာဥ၊ ဆလတ်၊ သကြား beet, ငရုတ်ကောင်း၊ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ကိုထိန်းညှိ၏ရည်ရွယ်ချက်။ တချို့ကပြည်တွင်းပညာရှင်များသခွားသီး, ခရမ်းချဉ်သီး, ရောင်စုံချိုမြိန်ငရုတ်ကောင်း, စတော်ဘယ်ရီ, rapeseed နှင့်အခြားအပင်ကြီးထွားမှုအပေါ်ကို LED အလင်းအရည်အသွေးကို၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာများနှင့်စက်ရုံပျိုးပင်များ၏ကြီးထွားအပေါ်အလင်းအရည်အသွေးအထူးသက်ရောက်မှုကိုအတည်ပြုပေမယ့်အများအားဖြင့်စမ်းသပ်ချက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပါပြီ စသည်တို့ကိုဆောင်ရွက်ချက်များအလင်းရဲ့အရည်အသွေးရရှိရန်သုံးနိုင်တယ်, သာမန်လျှပ်စစ်အလင်းရင်းမြစ်များသို့မဟုတ်အလင်း filter များကိုသုံးပါ, ထိုသို့ quantitative နှင့်တိကျစွာရောင်စဉ်တန်းစွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူး modulate ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ခရမ်းချဉ်သီးသည်ကျွန်ုပ်တိုင်းပြည်၏စိုက်ပျိုးမှုတွင်အရေးကြီးသောဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ စက်ရုံရှိအလင်းပတ် ၀ န်းကျင်ပြောင်းလဲမှုများသည်၎င်းတို့၏ပျိုးပင်များ၏ကြီးထွားမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်များစွာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အလင်းအရည်အသွေးနှင့်အလင်းပမာဏကိုတိကျမှန်ကန်စွာထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ခရမ်းချဉ်သီးပျိုးပင်များ၏ကြီးထွားမှုအပေါ်အလင်း၏အရည်အသွေးဖြည့်စွက်အလင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ရန် LEDs များအသုံးပြုခြင်းသည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအလင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုသင့်လျော်စွာထိန်းညှိရန်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်သည်။
အဆိုပါစမ်းသပ်ပစ္စည်းများခရမ်းချဉ်သီး "ဒတ်ခ်ျအနီရောင် Powder" နှင့် "သည်ဣသရေလအမျိုး Hongfeng" ၏နှစ်ခုအမျိုးပေါင်းခဲ့ကြသည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုကုသမှု6LED စက်ရုံတိုးတက်မှုနှုန်းအလင်းအိမ်တပ်ဆင်ထားသည်နှင့်တစ်ဦးရောင်ပြန်ရုပ်ရှင်အထီးကျန်မှုတွေအဘို့အသီးအသီးကုသမှုအကြား installed ဖြစ်ပါတယ်။4နာရီပြုလုပ်ခြင်းသည်ဖြည့်စွက်အလင်း, အချိန်ကို 6: 00-8: 00 နှင့် 16: 00-18: 00. မြေပြင်ကနေအလင်း၏ဒေါင်လိုက်အမြင့် 50 ကြောင်းကိုဒါ LED အလင်းနှင့်စက်ရုံအကြားအကွာအဝေး Adjust 70 စင်တီမီတာရန်။ အပင်နှင့်အမြင့်အရှည်ကိုစည်းမျဉ်းဖြင့်တိုင်းတာသည်။ ပင်စည်အထူအား vernier caliper ဖြင့်တိုင်းတာသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းအမျိုးမျိုးသောမျိုးများပျိုးပင်များနမူနာအတွက်ကျပန်းနမူနာကိုလက်ခံခဲ့ပြီးအပင် ၁၀ ကြိမ်ကိုတစ်ကြိမ်စီကောက်ယူသည်။ ကျန်းမာသောပျိုးပင်ညွှန်းကိန်းကို Zhang Zhenxian et al နည်းလမ်းအရတွက်ချက်သည်။ (ခိုင်ခံ့သောပျိုးပင်အညွှန်းကိန်း = အထူ / စက်ရုံအမြင့်×တပြင်လုံးကိုစက်ရုံခြောက်သွေ့တဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရပ်တ); ကလိုရိုဖီးလ်ကို 80% acetone နှင့်ထုတ်ယူခြင်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်; အမြစ်သန်စွမ်း TYC နည်းလမ်းကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်; ပျော်ဝင်နိုင်သောသကြားပါဝင်မှုကို anthrone colorimetry Determination ဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။
အစိမ်းရောင်အလင်းမှအပခရမ်းချဉ်သီးပျိုးပင်များ၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ညွှန်းကိန်းများအပေါ်ကွဲပြားသောအလင်းအရည်အသွေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ ခရမ်းချဉ်သီး“ Israel Hongfeng” ၏ပျိုးပင်များ၏အညွှန်းကိန်းသည်ထိန်းချုပ်မှုထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသည်၊ အဝါရောင်အလင်း> အပြာရောင်အလင်း၊ အပေါင်းသည်အလင်းအရည်အသွေးကိုကုသထိန်းချုပ်မှု၏လတ်ဆတ်ပြီးခြောက်သွေ့အလေးချိန်အညွှန်းကိန်းထိန်းချုပ်မှုများထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မား ရှိ. , အနီရောင်နှင့်အပြာရောင်အလင်းကုသပိုကြီးတဲ့တန်ဖိုးကိုရောက်ရှိ; အစိမ်းရောင်နှင့်အပြာရောင်အလင်းမှအပအခြားအလင်းအရည်အသွေးကုထုံးများ၏ပင်မအထူသည်ထိန်းချုပ်မှုထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားပြီးနောက်တွင်အနီရောင်၊ အနီနှင့်အပြာအလင်း> အဝါရောင်အလင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
ခရမ်းချဉ်သီး "Dutch Red Powder" သည်အလင်းအရည်အသွေးကိုအနည်းငယ်ကွဲပြားစွာတုံ့ပြန်သည်။ အစိမ်းရောင်အလင်း မှလွဲ၍ ခရမ်းချဉ်သီး "Dutch Red Powder" ပျိုးပင်များ၏ကောင်းမွန်သောပျိုးပင်အညွှန်းကိန်းသည်ထိန်းချုပ်မှုထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားပြီးနောက်မှအပြာရောင်၊ အပြာ - အနီရောင်> အဝါရောင် - အလင်းတို့ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အားလုံးအရည်အသွေးမြင့်ကုသမှုများ၏လတ်ဆတ်ခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့သောအလေးချိန်ညွှန်းကိန်းထိန်းချုပ်မှုထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့ကြသည်။ အနီရောင်အလင်းကုသမှုပိုကြီးတဲ့တန်ဖိုးကိုရောက်ရှိ; အပေါင်းသည်အလင်းအရည်အသွေးကိုကုသမှု၏ပင်စည်အထူထိန်းချုပ်မှုများထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့ခြင်းနှင့်အမိန့်အနီရောင်အလင်း> အဝါရောင်အလင်း> အနီရောင်နှင့်အပြာရောင်အလင်း> အစိမ်းရောင်အလင်း> အပြာအလင်းဖြစ်၏။ အမျိုးမျိုးသောညွှန်းကိန်း၏ဘက်စုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အနီရောင်အပြာနှင့်အနီရောင်အလင်း၏ဖြည့်စွက်နှစ်ခုခရမ်းချဉ်သီးအမျိုးပေါင်း၏တိုးတက်မှုအပေါ်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အစေ့အထူ၊ လတ်ဆတ်မှု၊ ခြောက်သွေ့သောအလေးချိန်နှင့်ခိုင်မာသည့်ပျိုးပင်အညွှန်းကိန်းများသည်ထိန်းချုပ်မှုထက်သိသိသာသာမြင့်မားသည်။ သို့သော်မျိုးကွဲအကြားအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ အနီရောင်နှင့်အပြာရောင်အလင်းကုသမှုအောက်မှာခရမ်းချဉ်သီး "အစ္စရေး Hongfeng" ၎င်း၏လတ်ဆတ်တဲ့အလေးချိန်ခြောက်သွေ့အလေးချိန်နှင့်ခိုင်ခံ့သောပျိုးပင်အညွှန်းကိန်းအားလုံးကြီးမားသောတန်ဖိုးများကိုရောက်ရှိနေပြီနှင့်အခြားကုသမှုနှင့်အတူအရေးပါသောကွဲပြားမှုရှိပါ၏ အနီရောင်အလင်းကုသမှုအောက်ရှိခရမ်းချဉ်သီး "Dutch Red Powder" ၎င်း၏အပင်၊ အထူအထူ၊ အမြစ်အရှည်၊ လတ်ဆတ်သောအလေးချိန်နှင့်ခြောက်သွေ့သောအလေးချိန်အားလုံးသည်ပိုမိုကြီးမားသောတန်ဖိုးများကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးအခြားကုသမှုများနှင့်သိသိသာသာကွဲပြားမှုများရှိသည်။
အနီရောင်အလင်းအောက်တွင်ခရမ်းချဉ်သီးပျိုးပင်များ၏အမြင့်သည်ထိန်းချုပ်မှုထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသည်။ အနီရောင်အလင်းကို stem elongated, တိုးမြှင့်အလင်းနှုန်းကိုခြောက်သွေ့နေပါစေစုဆောင်းခြင်းမြှင့်တင်ရန်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်အနီရောင်ဖြည့်စွက်ခြင်းသည်သခွားသီး၏လေ့လာမှုနှင့်ဆင်တူသည့်ခရမ်းချဉ်သီး၏“ အနီမှုန့်” ၏အမြစ်အကျယ်ကိုသိသိသာသာတိုးပွားစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အနီရောင်အလင်းသည်ဆံပင်အမြစ်၏အခန်းကဏ္promoteကိုလည်းမြှင့်တင်နိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ အနီနှင့်အပြာရောင်ဖြည့်စွက်မှုအရဟင်းသီးဟင်းရွက်ပျိုးပင်သုံးမျိုး၏အားကောင်းသောပျိုးပင်ညွှန်းကိန်းသည်ထိန်းချုပ်မှုထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသည်။
အနီရောင်နှင့်အပြာရောင်နဲ့ LED ရောင်စဉ်များ၏ပေါင်းစပ် monochromatic အလင်းကုသမှုထက် သာ. ကောင်း၏ထားတဲ့အပင်ကြီးထွားမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အနီရောင် LED ၏ဟင်းနုနွယ်ရွက်၏ကြီးထွားမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာမထင်ရှားပါ။ အပြာ LED ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်ဟင်းနုနွယ်ရွက်၏ကြီးထွားမှုဆိုင်ရာ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်သည်သိသိသာသာတိုးတက်လာသည်။ အနီရောင်နှင့်အပြာရောင် LED ရောင်စဉ်များ၏ပေါင်းစပ်အလင်းအောက်တွင်စိုက်ပျိုးသောသကြားဓာတ်ပါဝင်မှုသည်ကြီးမားသည်၊ ဆံပင်အမြစ်တွင် betain စုဆောင်းခြင်းသည်သိသိသာသာရှိပြီးဆံပင်အမြစ်တွင်ပိုမိုမြင့်မားသောသကြားနှင့်ဓာတ်ဓာတ်စုဆောင်းခြင်းကိုထုတ်လုပ်သည်။ အနီရောင်နှင့်အပြာရောင် LED မီးလုံးပေါင်းစပ်မှုသည်အပင်များ၏ကြီးထွားမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အသားတင် photosynthetic နှုန်းကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်ဟုလေ့လာမှုအချို့ကယုံကြည်သည်။ အနီနှင့်အပြာအလင်း၏ရောင်စဉ်တန်းစွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးမှုသည်ကလိုရိုဖီးစုပ်ယူမှုရောင်စဉ်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ထို့အပြင်အပြာအလင်းဖြည့်စွက်ခြင်းသည်လတ်ဆတ်သောအလေးချိန်၊ အလေးချိန်ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်ခရမ်းချဉ်သီးပျိုးပင်များ၏ခိုင်မာသောပျိုးပင်အညွှန်းအပေါ်ကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ပျိုးပင်အဆင့်တွင်အပြာရောင်အလင်းရောင်ခြည်သည်ခိုင်ခံ့သောပျိုးပင်များစိုက်ပျိုးရန်အထောက်အကူဖြစ်သောခရမ်းချဉ်သီးပျိုးပင်များကြီးထွားမှုကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ ဒီလေ့လာမှုကလည်းအဝါရောင်အလင်းနှင့်အတူဖြည့်စွက်သိသိသာသာ "အစ္စရေး Hongfeng" ခရမ်းချဉ်သီး၏လိုရိုဖီးလ်နဲ့ carotenoids အကြောင်းအရာတိုးပွားလာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှု၏ရလဒ်များအရအစိမ်းရောင်အလင်းသည် Arabidopsis chlorosis ပျိုးပင်များ၏လျင်မြန်စွာကြီးထွားမှုကိုအားဖြည့်ပေးကြောင်း၊ အစိမ်းရောင်အလင်းဖြင့် activated light signal သစ်တစ်ခုသည်ပင်စည်ကိုရှည်စေပြီးကြီးထွားမှုကိုတားဆီးစေသည်။
ဤစမ်းသပ်မှုမှရရှိသောကောက်ချက်များစွာသည်အပင်ကြီးထွားမှုအတွက် LED ရောင်စဉ်၏အထူးအခြေအနေကိုအတည်ပြုခြင်း၊ အလင်းအရည်အသွေး၏အာဟာရ morphogenesis နှင့်အပင်ပျိုးပင်များ၏ဇီဝကမ္မဝိသေသလက္ခဏာများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အရေးကြီးသည်။ ခိုင်မာသည့်ပျိုးပင်များကိုစိုက်ပျိုးရန်အတွက်သီအိုရီအခြေခံနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ရန်အလင်းဖြည့်စွက်အရည်အသွေးကိုအသုံးပြုပါ။ သို့သော် LED ဖြည့်စွက်အလင်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စက်ရုံအဆောက်အအုံများအတွက်ပျိုးပင်များမွေးမြူရန်အနာဂတ်တွင်အနာဂတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (အလင်းအရည်အသွေး) စွမ်းအင် (အလင်းကွမ်တမ်သိပ်သည်းဆ) ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အလင်းရောင်ရှိသည့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏သက်ရောက်မှုများနှင့်ယန္တရားများကိုစနစ်တကျစူးစမ်းလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ ။ Zhongguang ပတ်ဝန်းကျင်၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စည်းမျဉ်းချမှတ်ထားသောသတ်မှတ်ချက်များကိုလျစ်ပေးပါသည်။